Faah-faahinta Naga soo gadhay dad Muwaadiniin Soomaaliyeed Oo Gaadhaya ilaa 20 Ruux Oo Lagu Xidhay Dalka Masar.+ sababta lagu xidhay | Raadgoob
Faah-faahinta Naga soo gadhay dad Muwaadiniin Soomaaliyeed Oo Gaadhaya ilaa 20 Ruux Oo Lagu Xidhay Dalka Masar.+ sababta lagu xidhay
Wararka naga soo gaadhaya dalka Masar ayaa sheegaya in dad Soomaali ah dalkaasi lagu xidh-xidhey.
Soomaalida xabsiga la dhigay oo tiradooda ay gaadheyso 17 Qof ayaa waxaa laga qab qabtay xaafadaha ku yaalla degmada Nasri City oo ah meel si weyn Soomaalida ay u degan yihiin.
Sida ay xaqiijiyeen jaaliyadda Soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira Ciidamada amniga oo aad u hubeysan ayaa gudaha u galay Maqaaxida Soomaalida iyaga oo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan dalkaasi, waxayna soo xidheen 17 Dhalinyaro wiilal Soomaali ah.
Soomaalida la xidh-xidhay waxaa ku jira wiil asalkiisa uu Soomaali yahay balse heysta dhalashada dalka Mareykanka, waxaana socda dadaalo lagu soo deynayo dhalinyaradan.
Dadka la xidh-xidhay oo isugu jira Arday iyo Qaxooti ayaa waxaa loo gudbiyay saldhig ku yaalla degmada Nasri City, si loo hubiyo in ay yihiin dad sharci ku jooga dalka Masar.
“Walaal Soomaalida la qab qabtay tiradooda waa 17 waxay isugu jiraan Arday iyo Qaxooti, Ciidamada geesaha ayay ka soo galeen, kadib waxay wateen dadkii, ilaa hadda magaraneyno sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xadhigooda.” Ayuu yidhi Maxamed Cabaas oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi.
Sanadkii tagay 2017 dalka Masar waxaa lagu xidh-xidhay Soomaali Boqolaal gaadheysa, xilliyo kala duwan, kuwaasi oo isugu jiray Arday, Qaxooti iyo dad kale oo caadi ah, waxaana Soomaaliya loo soo tarxiilay dadkii sida caadiga ahaa u joogay dalkaasi.